Galmudug & Gobolada Waqooyi oo shaaciyay Jadwalka doorashada kuraas kamid ah Golaha Shacabka | Warbaahinta Ayaamaha
MUQDISHO-AYAAMAHA-Guddiyada Hirgalinta Doorashooyinka Gobolada Waqooyi ee Somaliland & Maamulka Galmudug ayaa soo bandhigay jadwalka doorashada kuraas kamid ah kuraasta Golaha Shacabka, kuwaas oo doorashadooda todobaadka soo socda horaantiisa la qabanayo.
Qoraal kasoo baxay Guddiga Hirgalinta Doorashooyinka Gobolada Waqooyi ee Somaliland ayaa lagu sheegay in la bilaabayo 22-ka Bishaan oo ku beegan Sabtida Diiwangelinta ergada, tababarida, qabashada codsiga iyo xaqijinta
shuruudaha musharaxiinta ayna socon doonaan ilaa 23-ka Bishan, halka 24-ka Bisha oo ku beegan Isniinta soo socota la qabanayo doorashada 12-ka kursi ee Golaha Shacabka.
12-ka Kursi ee Golaha Shacabka ee Gobolada Waqooyi ee doorashadooda lagu qabanayo Magaalada Muqdisho ayaa waxaa ay kala yihiin.
1: Hop260 oo ay ku fadhiso Faadumo Odawaa Raage.
2: Hop257 oo uu ku fadhiyo Cabdalla Xaaji Cali Axmed
4: Hop215 oo uu ku fadhiyo Faatix Saciid Xasan
5: Hop267 oo ay hadda ku fadhiso Seynab Maxamed Caamir
6: Hop268 oo uu ku fadhiyo Maxamed Cali Xagaa oo ah Wasiiru Dowlaha Wasaaradda Gaashaandhigga
7: Hop269 oo uu ku fadhiyo Maxamed Cabdullaahi Kaamil.
8: Hop245 oo uu ku fadhiyo Cabdiraxmaan Axmed Suge
9: Hop247 oo ay hadda ku fadhiso Khadro Maxamed Tukaale
10: Hop209 oo uu ka geeriyooday Axmed Dhimbil Rooble ( Casoowe)
10: Hop211 oo ay ku fadhiso Caasho Koos Maxamuud Cumar
11: Hop201 oo uu hadda ku fadhiyo Wasiirka Maaliyadda Cabdiraxmaan Ducaale Beyle
12: Hop214 oo uu ku fadhiyi Dr Cilmi Maxamuud Nuur.
Dbinaca kale Guddiga Hirgelinta doorashooyinka Galmudug ayaa shaaciyay Jadwalka doorashada 7 Kursi oo kamid ah Golaha Shacabka, kuwaas oo kala ah.
1: Hop007 oo uu ku fadhiyo Wasiiru dowlihii hore ee Wasaaradda Arrimaha Gudaha Somalia C/laahi Faarax Wehliye.
2: Hop061 oo uu ku fadhiyay dhowrkii sano ee la aoo dhaafay Cabduwweli Maxamed Qanyare.
3: Hop064 oo ay ku fadhiso Sahro Cumar Maalin
4: Hop248 oo uu hadda ku fadhiyo Maxamed Axmed Abtidoon
5: Hop089 oo uu ku fadhiyo Cabdi Shire Jaamac
6: Hop096 oo uu ku fadhiyo Cabdicasiis Cilmi Cali
7: Hop071 oo uu ku fadhiyo Cabdisaabir Nuur Shuuriye oo hadda ah Wasiirka Dekadaha Maamulka Galmudug.
Soomaaliya ayaa waxaa sirasmi ah uga billowday doorashooyinka Golaha Shacabka, waxaana todobaadka soo socda Muqdisho iyo Maamulada Jubbaland, Puntland iyo Koonfur Galbeed ka bilaabanaya doorashada Xildhibaannada Golaha Shacabka.